Duqeymaha "bani'aadannimo" ee Kobane - BBC News Somali
Duqeymaha "bani'aadannimo" ee Kobane
Image caption Jeneral John Allen
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan sameynta isbahaysiga ka dhanka ah ururka Daacish, ayaa sheegay in weerarrada cirka ah ee Mareykanka ay ka geysanayaan magaalada Kobane ay yihiin kuwo bani'aadanimo ku saleysan.
Jeneral John Allen ayaa warfidiyeennada u sheegay in duqeymaha looga gol leeyahay in culeyska looga yareeyo xooggaga Kurdiyiinta ee magaalada Kobane ka difaacaya dagaalyahannada Daacish.
Jeneral Allen ayaa sheegay in duqeymaha cirka ah ee ay diyaaradaha Mareykanka iyo xulafadiisa ka geysanayaan magaalada Kobane, la dardar geliyay si fursad ay u helaan xooggaga Kurdiyiinta ayna dib isugu soo urursadaan.
Jeneralka ayaa ka gaabsaday in uu ku tilmaamo natiijada kasoo bixi karta dagaalka magaalada Kobane ee ku taalla waqooyiga Suuriya mid xasaasi ah, walow ay magaaladaasi ku taallo soohdinta ay Suuriya la wadaagto Turkiga oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO.
Afhayeen u hadlay waaxda difaaca ee Mareykanka, ee Pentagon loo yaqaano, ayaa sheegay in suuragal ay tahay in magaalada Kobane la qabsado, in kasta oo ay weerarrada dhanka cirka ah ay ku dhinteen boqolaal dagaalyahan oo Daacish ka tirsan.
Balse waxa uu carabka ku adkeeyay in howlgalka milateri ee looga soo horjeeda ururka Daacish uu ka ballaaran yahay hal magaalo oo keliya.
Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ugu magac daray dagaalka dhanka ah Daacish "Operation Inherent Resolve," kaasoo ka turjumiya hadalada dowladda Mareykanka ee ah in dagaalka ka dhanka ah ururkaasi uu ahaan doono mid daba dheeraad oo dhib badan.